March 17, 2012 – democracy for burma
Daw Aung San Suu Kyi message to hongkong university.wmv-english
On March 17, 2012 March 17, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
တပ်မတော်၏ အမိန့်အောက်တွင် ပြာပုံဖြစ်ခဲ့သည့် ဆုံပွိုင့် စားသောက်ဆိုင်၏ သတင်းဓါတ်ပုံ..
Karen Newsletter KIC(February-2012)
မတ်လ ၁၇ရက်၊ ၂၀၁၂။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)kic news
မတ်လ ၁၇ရက်၊ ၂၀၁၂။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူ အထူးဒေသတစ်နေရာတွင် ယမန်နေ့အစောပိုင်းက နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF)အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ BGF ဘက်က တပ်ခွဲမှူးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယမန်နေ့ မနက် ၄နာရီခန့်တွင် မြိုင်ကြီးငူအထူးဒေသရှိ ရင်းပိုင်းတံတား(ယော်ပိုတို)နေရာတွင် BGF တပ်ရင်း(၁၀၁၁)တပ်ရင်းမှ တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီးတင်ညွှန့် စီးနင်းလာသည့် ကားတစ်စီးကို BGF တပ်ရင်း(၁၀၁၂)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု BGF နှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “၁၆ရက်နေ့ မနက် ၄နာရီခွဲလောက်မှာ ဗိုလ်တင်ညွှန့်နဲ့ သူ့ညီ နှစ်ယောက် မြိုင်ကြီးငူကနေ ရေတံခွန်ကို သွားဖို့ ရင်းပိုင်းတံတားအ ရောက်မှာ (၁၀၁၂)တပ်ရင်းက ဗိုလ်ဒေါဘိုးရဲ့လူတွေ စနိုက်ပါနဲ့ ပစ်ထည့်လိုက်တော့ ဗိုလ်တင်ညွှန့် ပွဲချင်းပြီးပဲ သေသွားတယ်။ သူ့ညီ ဒရိုင်ဘာကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး”ဟု ပြောသည်။
၁၀၁၂တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ယခုလို ပစ်ခတ်ရခြင်းမှာ ဗိုလ်တင်ညွန့်မှ ဒီကေဘီအေ ၉၀၅၏ ကားကို စီးနင်းလာသည့်ကားသည့်အတွက်ကြောင့် မှားယွင်းပစ်ခတ်မိခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု မြ၀တီရှိ ဒီကေဘီအေ ဆက်ဆံရေးရုံးမှ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
သူက “ကားက ကျနော်တို့ ၉၀၅က တပ်ရင်းမှူးကားပေါ့နော်။ အဲဒီကားကို ဗိုလ်တင်ညွှန့်ညီက ပြင်ပေးဖို့ ယူလာတာ။ အဲဒီကားနဲ့ သူ (ဗိုလ် တင်ညွှန့်)က ကားကြုံအဖြစ် စီးလာတာ။ အဲဒါကို DKBA ထင်လို့ သူတို့ (၁၀၁၂) ပစ်လိုက်တာထင်တယ်”ဟု ပြောသည်။
၎င်းပစ်ခတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ KNLA တပ်မဟာ (၇)မှ ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးအယ်ဆဲဆဲက “စည်းကမ်းလည်းမရှိ၊ ပေါ်လစီလည်းမရှိ တစ်ဗိုလ် တစ်မင်း၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းပုံစံနဲ့ နေတဲ့ပုံစံဆိုတော့ အချင်းချင်း မကျေမနပ်ဖြစ်လို့ ပစ်ခတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကတော့ ဘာမှ မပြောတတ်ပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
ယခု အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာတွင် DKBA နှင့် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ BGF (၁၀၁၁)နှင့် (၁၀၁၂)တပ်ဖွဲ့ဝင်များသာ အခြေချ လှုပ်ရှားရာ နေရာဖြစ်သည်ဟု နယ်မြေခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ နယ်ခြားစောင့်တပ် (၁၀၁၁)တပ်ရင်း၏ တပ်ရင်းမှူးမှာ ဗိုလ်မှူး စိုးနိုင်ဖြစ်ပြီး (၁၀၁၂)တပ်ရင်း၏ တပ်ရင်းမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ရက်နေ့တွင် မြိုင်ကြီးအထူးဒေသ၌ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဗိုလ်မှူးစောဘိ ဦးစီးသည့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်နက် ၂၀ကျော် သိမ်းဆည်းခဲ့ရာမှ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသော်လည်း BGF တပ်ဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုမှာ တနှစ်ကျော်အကြာတွင် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်သည်။
Ceasefire promise broken, KNU leader Padoh Mahn Nyein Maung sentence to life
The sentencing of Karen National Union leader, Padoh Mahn Nyein Maung, toalife sentence has the potential to derail government peace talks. KNU officials claim they were given assurances by government representatives that Mahn Nyein Maung would be freed as part of the ceasefire discussions.
The Karen National Union leader Padoh Mahn Nyein Maung was sentenced to life plus three years on March 13th atacourt inside Burma notorious Insein Prison.
Speaking to Karen News, Padoh Mahn Nyein Maung’s lawyer, U Kyi Myint said his client was sentenced under Article 17/1 and 122/1 by the acting judge, U Hla Win at 12 pm on March 13.
“Article 17/1 is three years and 122/1 is life. They combined the sentences. He was sentenced at about 12 pm by U Hla Win, judge of court in Northern Insein district.”
The KNU had been led to believe at the recent ceasefire talks that the government would release Padoh Mahn Nyein Maung as an act of goodwill towards building trust in the current peace process. Now many observers are concerned the jailing and the severity of Padoh Mahn Nyein Maung sentence and as his lawyer, U Kyi Myint, points out that it will haveanegative impact on the peace building process.
“The government claims they are trying to build peace and they have signed preliminary agreement with the KNU. During this peace building time, the government by harshly sentencingasenior leader of the KNU – I think there will be consequences that will hurt the peace process.”
U Kyi Myint says Padoh Mahn Nyein Maung still has the right to appeal within 60 days.
Naw Wah, Mahn Nyein Maung’s wife, told Karen News that the news of the severe sentence given to her husband had deeply saddened her.
“I am upset. He (Mahn Nyein Maung) is not young now. I want him to be freed. I also want the KNU and the government to discuss his release when they hold their talks. If they can get him released, our family will be very happy.” Continue reading “Ceasefire promise broken, KNU leader Padoh Mahn Nyein Maung sentence to life” →
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ရှေ့ မေတ္တာရပ်ခံ သဘောထားဖော်ထုတ်မှုဖြစ်ပွား
အမျိုသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ကျော်ခန့်က မအူ ပင်မြို့ခံ လူငယ် ၄၀ နီးပါးက မေတ္တာရပ်ခံ သဘောထားဖော်ထုတ် တောင်းဆိုမှု တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ ကြ ကြောင်းသိရသည်။ မအူပင် မြို့ခံပြည်သူ အများ၏ ဆန္ဒသဘောထားအား ကိုယ်စားပြု၍ ယင်းလူငယ် ၄၀ ခန့်သည် မအူပင်မြို့မှ ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်း ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ရှေ့သို့ ကားသုံးစီးဖြင့် လာရောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိတို့ မေတ္တာ ရပ်ခံလိုသည့် ကိစ္စရပ် ကိုပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မေတ္တာရပ်ခံတောင်း ဆိုသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား မအူပင်မြို့သို့ လာရောက် စေလို ခြင်း ကိစ္စ ရပ် ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ “ အမေ့အနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ ခရီးတွေထွက်ရလို့ ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်သို့ပင် သို့ငြားသော်လည်း ကျွန်တော်တို့မအူပင်မြို့သူမြို့သားတွေက အမေ့ကိုခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် လာစေချင်တယ်။ ကျွန် တော် တို့လူငယ်တွေကလည်း အမေ့ကိုကြိုချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အမေ့ကိုလာပြီး မေတ္တာရပ်ခံ တာပါ ” ဟုဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ခြံရှေ့ လာရောက်ခဲ့သည့် မအူပင်မြို့ခံလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကို စည်သူ ကပြောသည်။
AsianFame Media Group ဓါတ်ပုံ- အင်တာနက်
ဒေသတွင်း အခြေအနေများကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မအူပင်မြို့သို့အောင်နိုင်ရေး ခရီးစဉ် လာရောက်စေ လို ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ယင်းကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးအနီးကပ်တာဝန်ယူ ထားသည့် ကိုကျော်ဆန်းအား ပေါ်ပြူလာနယူးစ်ဂျာနယ်မှ မေးမြန်းကြည့်ရာ လောလောဆယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ခရီးစဉ် ပြည့်နေသောကြောင့် မအူပင်သို့ သွားရောက်ရန်မှာမဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကိစ္စရပ်အားပြေလည်ရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ဖြေရှင်းလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။